नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल भदौ २९ गते सकिँदैछ। देशमा व्याप्त लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि देश कुलमानमय बन्यो। उनको कार्यकालमा लोडसेडिङ मात्रै हटेन, विद्युत चुहावट पनि घट्यो। घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा नाफामा समेत गयो।
उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्राधिकरणमा पुनः उनलाई ल्याउनपर्ने जनस्तरबाट आवाज उठेको छ। कुलमानको पक्षमा जनस्तरमा व्यापक समर्थन देखिएको छ।
उनलाई अर्को ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ती गर्न लागि कुनै ऐन, नियम पनि बाधक छैनन्। २०७३ सालको भदौमा नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सोही वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाण्डौलाई लोडसेडिङमुक्त बनाए। त्यतिबेलैबाट उनको कामको प्रशंसा शुरु भएको हो। उनले कार्यकाल सम्हाल्नु अघि हिउँदमा दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको थियो।
तर उनकोे नेतृत्वकालमा देश लोडसेडिङमुक्त भयो। उनले कार्यकाल सम्हाल्दा ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भयो।
अहिले काठमाण्डौ उपत्यकमा अव्यवस्थित तारलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ। स्मार्ट मिटरको काम अघि बढेको छ। उनको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनको पुनः नियुक्तिको बिषयलाई लिएर फेक समाचारहरु समेत बने। सामाजिक सञ्जालमा बधाइको ओइरो लाग्यो।
जे सुकै होस् यसले सरकारलाई सकारात्मक दबाव दियो भन्ने लाग्छ। कुलमान नेतृत्वमै आएपछि देश उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको हो। बर्षौदेखि व्यप्त लोडसेडिङ उनको कार्यकालमा अन्त्य भयो। उनले यसका लागि दिनरात खटेर काम गरे। त्यसैले त अहिले उनलाई पुनः नियुक्ती दिनुपर्ने आवाज उठ्यो। उनलाई नियुक्त गर्ने वा नगर्ने त्यो सरकारको अधिकारको कुरा भयो।
तर सरकारलाई दबाव पक्कै छ। अन्य विभिन्न निकायमा भएका नियुक्ती विवादित भइरहेका बेला जनताले उनको विकल्प देखेका छैनन्। आम मानिसमा उनी हट्दा फेरि लोडसेडिङ व्यूतिन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ। आसा छ सरकारले पनि जनस्तरमा उठेको आवाजको कदर गर्ने छ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७७ १०:५६ मंगलबार
सबैले आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरे पनि देश सुन्दर हुन्छ : कुलमान घिसिङ
काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्यसँगै ३२ वर्षसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउन सकेको बताउनुभयो । आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरणलाई झण्डै ४० अर्ब नाफामा ल्याएको घिसिङले बताउनुभयो । सोमबार काठमाण्डाैमा विद्यार्थीहरू माझ भएको एक कार्यक्रममा ब...
उज्यालो अनलाइन 12 दिन पहिले
कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट आज बिदा हुँदै, दोहोर्‍याउन ‘प्रधानमन्त्रीको अनिच्छा’
काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल आज (आइतबार) सकिँदैछ । २०७३ सालको भदौ २९ गते नियुक्त हुनुभएका घिसिङको कार्यकाल आज राति १२ बजेदेखि सकिन लागेको हो । आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा निकै प्रशंसा कमाउनुभएका कुलमान घिसिङलाई अर्को कार्यकाल पनि प्राधिकरणको ...
उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७७
के भारतको बिजुलीले नै रोकिरहेको छ लोडसेडिङ ? हेर्नुस् तथ्यांक
१२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आलोचकहरुले लगाउने गरेको एउटा आरोप हो, भारतबाट बिजुली किनेर लोडसेडिङ हटाएको छ । घिसिङ अहिले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा रहँदा फेरि यो विषय बाहिर …
अनलाइनखबर श्रावण २०७७
कुलमान घिसिङकाे कार्यकाल दोहोर्‍याउन कलाकारको माग, सामाजिक सञ्जालमा समर्थन
काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिँदैछ । २०७३ सालको भदौ २९ गते नियुक्त हुनुभएका कुलमानले कुशल व्यवस्थापनमार्फत नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि उहाँको प्रशंसा सुरु भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र रुग्ण बनेका जलविद्...
विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वका लागि दौडधुप
४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिँदैछ । २०७३ भदौ २९ गते कार्यकारी निर्देशक भएर देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन भूमिका खेलेका घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन …
कुलमान घिसिङको कार्यकाल अर्को महिना सकिँदै, दोहोर्‍याउला त सरकारले ?
काठमाण्डौ - नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल अर्को महिना सकिँदैछ । २०७३ सालको भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल आउँदो भदौ २९ गते सकिँदैछ । लोडसेडिङ हटाएको, रुग्ण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेको, विद्युत चुहावट घ...
जहाँ कुलमान घिसिङलाई गाली गरिन्छ...
विराटनगर । देशबाट लोडसेडिङ हटाएकोमा कुलमान घिसिङको जताततै वाहवाही छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी
बाह्रखरी फाल्गुन २०७६
बाह्रखरी माघ २०७६
प्रशारण लाइनको क्षमता कमजोर भएकाले लोडसेडिङ भयो : कार्यकारी प्रमुख घिसिङ
काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्रशारण लाइनको क्षमता कमजोर भएकाले लोडसेडिङको समस्या देखिएको जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्रशारण लाइनको क्षमता कमजोर भएकाले समाप्त भइसकेको लोडसेडिङको समस्या बल्झिएको बताउनुभएको हो । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ए...